ဂင်းနစ် စံချိန်တင်ထားတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင် ၉ ယောက်
ကိုးရီးယားအနုပညာရှင်တွေလည်း ဂင်းနစ်စံချိန်တွေနဲ့ပါနော်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ Insight သတင်းဌာနက ကဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ထားတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ စံချိန်တင်ထားလဲဆိုတာကတော့ တကယ့်ကို ထင်မထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပါ။
Hwang Kwang Hee ကိုတော့ အားလုံးလည်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ “To The Beautiful You” မှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။ Hwang Kwanghee ကတော့ အဝတ်အထပ်ပေါင်း အများဆုံး ဝတ်နိုင်ခဲ့သူအဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ထားတာပါ။
Kang Daniel ကတော့ Instagram follower ၁ သန်း အမြန်ဆုံးပြည့်သူအဖြစ် စံချိန်တင်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ဒီစံချိန်ကိုတော့ ချိုးဖျက်သွားတယ့် သူတွေရှိနေပါပီ။ တော်ဝင်မင်းသား Harry နဲ့ Meghan Markle တို့ရဲ့ တရားဝင် Instagram account ပါ။
Lee Hyori ဆိုတာကတော့ Kpop လောကရဲ့ ဦးဆောင်ခဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါပဲ။ Kpop လောကရဲ့ ဘုရင်မလို့တောင် တင်စားလို့ရပါတယ်။ သူမကလည်း ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ထားပါတယ်။ သတင်းစာရဲ့ ပထမစာမျက်နှာမှာ အများဆုံး ဖော်ပြခံထားရတဲ့ သူအဖြစ်ပါ။
Psy ကိုဖော်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ Gangnam Style နဲ့ကတော့ ခွဲခြားထားလို့မရပါဘူး။ Gangnam Style သီချင်းဟာ Kpop ပရိသတ်များသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူများရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းဆိုတာ လူတိုင်း ငြင်းလို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။ Psy ရဲ့ ဂင်းနစ်စံချိန်ဟာလည်း Gangnam Style နဲ့ပတ်သက်ပီး ရခဲ့တာပါပဲ။ Gangnam Style ရဲ့ Music video ဟာ အမြန်ဆုံး အချိန်အတွင်း Youtube ကြည့်ရှုသူ တစ်ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အတွက် ဂင်းနစ်စံချိန် တင်ထားတာပါ။
TVXQ! ဆိုတာကတော့ Kpop လောကရဲ့ ဂန္တဝင်အဖွဲ့တစ်ခုဆိုတာ Kpop ကို နှစ်နှစ်ကာကာ ရူးသွပ်သူတိုင်း ငြင်းရမယ်မထင်ပါဘူး။ TVXQ! မှ စတင် ထွင်းထုခဲ့တဲ့ လျှောက်လမ်းတွေလည်း အများကြီးပါ။ ဒီလို အဖွဲ့တစ်ခုဟာလည်း ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ထားတာ အံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ TVXQ! အဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ဓာတ်ပုံအများဆုံး အရိုက်ခံရတဲ့ အဖွဲ့အနေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ လုပ်ငန်းအတွက် အကြိမ်ရေနဲ့တင် အကြိမ်ပေါင်း သန်း ၅၀၀ ကျော်ပါတဲ့။
Shinhwa အဖွဲ့ဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ SM Entertainment မှ ပွဲဦးထွက်ပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့ပါ။ Kpop လောကရဲ့ First Generation အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ SM Entertainment နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တဲ့ နောက်မှာလည်း အဖွဲ့အနေနဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Shinhwa အဖွဲ့ဟာ အဖွဲ့အနေနဲ့ အကြာဆုံး ရပ်တည်နိုင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန် တင်ထားပါတယ်။
7. Kang Hodong
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ Nation’s MC တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Kang Ho Dong ဟာလည်း ဂင်းနစ်စံချိန်နဲ့ပါ။ သူ့အချိန်ကတော့ အချိန်အကြာဆုံး လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်မှု ပြုခဲ့သူအဖြစ် စံချိန်တင်ထားတာပါ။ ကြာချိန်ကတော့ ၆ နာရီနဲ့ ၄၃ မိနစ်ကျော်ကြာ ဆက်တိုက် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှု လုပ်ခဲ့တာပါ။
အရပ်အမောင်း ၁၈၁ စင်တီမီတာ ရှိတဲ့ မင်းသမီး Han Young ကတော့ ခြေတံအရှည်ဆုံးရှိတဲ့ အမျိုးသမီး အနုပညာရှင်အဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ထားတာပါ။
Song Hae ကတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဂန္တဝင် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၂၇ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုဆို အသက် ၉၃ နှစ်ရှိပါပီ။ Song Hae ဟာ KBS ရဲ့ “National Singing Contest” ကို ၁၉၈၀ မှစလို့ အစီစဉ်တင်ဆင်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယခု ၂၀၂၀ ဟာ သူ့ရဲ့ အနှစ် ၄၀ မြောက်ပါ။ Song Hae ကတော့ ကာလအကြာရှည်ဆုံး အစီအစဉ်တင်ဆင်သူ အဖြစ် ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Next ပရိတ်သတ်အချစ်တော် Song Ji Hyo ရဲ့အအောင်မြင်ခဲ့ဆုံးဇာတ်လမ်းများ »
Previous « "1 Billion Views" album နဲ့ ပရိသတ်တွေဆီ ပြန်လာမယ့် EXO-SC
2021 ရဲ့အခမ်းနားဆုံးဆုပေးပွဲမှာ အဓိကဇာတ်လိုက်နေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ထိုင်းမင်းသမီး (၆) ဦး